300 qof oo lagu xiray rabshado ka dhacay Los Angeles - iftineducation.com
300 qof oo lagu xiray rabshado ka dhacay Los Angeles
aadan21 / November 29, 2014
iftineducation.com – Booliiska magaalada Los Angeles ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in boqolaal dad ah ay xabsiga dhigeen kadib markii labadii habeen ee lasoo dhaafay magaaladaasi ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata.
Dadka la xiray ayaa la sheegay in ay burbur u geysteen goobaha ganacsiga halka qaarkood lagu qabtay iyagoo hubsita.
Mudaharaadayaasha ayaa sheegay inay banaanbaxooda ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan siideynta askari cadaan ah oo wiil madow ku dilay magaalada Ferguson ee wadankaasi.
Xiisada Michel Brown oo ah wiil bishii Agoosto lagu dilay magaalada Feguson ayaa saameysay dalka Maraykanka iyadoo banaanbaxyo badan ka dhaceen magaalooyinka waaweyn.
Magaalada Feguson oo ahayd goobta ay rabshadaha ugu badan ka dhaceen ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay degenayd, hase yeeshee magaalada Los Angeles ayaa habeenadii lasoo dhaafay kusoo badanayeen banaanbaxyada rabshadaha wata.
Dadka Madow ayaa ku mudaharaadaya gaboodfalada ay kala kulmaan booliiska Maraykana oo marar badan dilal u geystay dad madow oo dhalinyaro u badan oo aan wax hub ah sidan.
Masha allah :Fanaanada Caanka ah Ee Hodan Cabdi Raxmaan Dheere Oo gabi ahaan Fankii Isaga baxday Umada Somaliyeed Ka Codsatay In Heesaheeda dhageysan(VIDEO CODSI)
Dagaal ka socda Kirkuk Ciraaq